I-Cherry | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Indlela yokuvikela ama-cherries ezwayo kusuka ezilobungwini nezifo
I-cherry ye-Felt (i-Prunus tomentosa) i-shrub eMpumalanga Ekude ayikhuphuki ngaphezu kwamamitha amathathu ukuphakama. Ngenxa yezithelo ezinhle zakuqala kanye nezithelo ezincane ezivuthiwe ezikhuliswa abalimi eRussia, e-Ukraine naseBelarus. Izithelo ze-cherries eziqothileyo zincane kunama-cherry ajwayelekile, kodwa cishe cishe ayikho i-asidi ayinqobe uthando lwawo wonke umuntu.
Indlela yokutshala i-cherry ensimini: ukutshala, ukuchelela, ukusika izihlahla, umanyolo
Ngaphandle kwe-cherry, kunzima ukucabanga ngensimu yangempela. Cishe kuyo yonke indawo esiyikhulayo i-cherry ensimini. Futhi ngokuvamile kaningi hhayi kwesihlahla esisodwa, kodwa eziningana. Isithelo se-cherry sinemnandi, sinempilo, sinomsindo, sinomusa omuhle okomnandi, ojwayele abaningi kusukela ebuntwaneni. Ngaphezu kwalokho, i-cherry ihamba kahle futhi ibukeka nayo yonke imithi yezithelo.
Incazelo nesithombe sezinhlobonhlobo ezinkulu ze-cherries
I-cherry yi-subgenus yezitshalo ze-genus Plum kusuka ku-Pink family. Njengamanje, abalimi baye bathatha amahlamvu ama cherry nama cherry, abonakala ngokumelene neqhwa nezifo, kanye nobukhulu obukhulu bezithelo. Ezihlukahlukene kakhulu kunazo zonke ze-cherry yi-Miracle Cherry. Uyazi? I-cherry yokuqala esuka e-Asia Minor eya eRoma yaziswa ngumnikazi wamakhompiyutha kanye nomnikazi wezinceku uLucull.
I-Cherries: incazelo nesithombe sezinhlobo zokuvuthwa eziphakathi
Ukutshala ama-cherry ensimini, okuzojabula minyaka yonke nezitshalo eziningi, udinga ukuthatha indlela enesibopho ekukhethweni kwayo. Futhi akufanele uqale ngokufuna ulwazi mayelana nokuthi lukhulu kangakanani futhi lumnandi izithelo zomuthi wesithelo ozithandile, kodwa ukulalela izici ezinjenge-frost ukumelana, ukutholakala kwezifo kanye nama-parasites, ukuzinza nezikhathi zokuhluma.
Ukulima kwe-cherry ezwayo: izici zokutshala nokunakekela isihlahla samahlathi
I-cherry ye-Felt ingokwama-plum izitshalo. Ingahlanganiswa ne-peach, iplamu, ipulazi cherry, i-apricot. Kuyakwazisa abalimi ukuvuthwa kokuqala kwezithelo, izithelo eziqinile, iqhwa ukumelana nezakhiwo ezinhle kakhulu zokuhlobisa. I-cherries ehlwithayo kulula ukutshala nokugcina, kodwa idinga ukunamathela ngokuqinile emisebenzini yezolimo kusuka kubalimi.
Izinhlobo ezidumile eziyishumi zokuqala zama cherry ngencazelo nesithombe
I-cherry - isiko lezingadi elivamile kunazo zonke. ICaucasus neCrimea ibhekwa njengendawo yokuzalwa yalesi sihlahla. Kuyinto engaphezulanga, ikhula kunoma yiziphi izimo, kufaka phakathi nesifunda samatshe. Kodwa-ke, izimo ezinhle kakhulu zokukhula kanye nokuhluma yizinhlabathi ezivundile nemifula. Ngenxa yomsebenzi wabalimi bezitshalo, ama-cherries angaba nenambitheka ehlukile kanye nombala wezithelo, izinhlobo zawo ziyahlukahluka kokubili emandleni okukhula kwesihlahla nangokwe-fruiting.
Izakhiwo eziwusizo zama cherry ngomzimba womuntu
I-Cherry isithelo esithandayo sabaningi, kodwa akubona bonke abazuzisa izakhiwo ezizuzisayo zalezi ezijwayelekile kuwo wonke amajikijolo. Lesi sihloko sizokutshela ukuthi ungayisebenzisa kanjani imithi yokwelapha nokuthi i-cherry iyasiza kanjani emzimbeni, sizocabangela nombuzo we-cherry amathambo, umonakalo kanye nezinzuzo. I-Cherry i-calories nokubunjwa kwe-Cherry ilungu lomndeni waseRosaceae, elinamaqabunga anombala obuhlaza obunombala obomvu nomqhele osakazeka kakhulu.
Ukusika Izihlahla Zesihlahla - Imithetho Yabasunguli
Umbuzo wokutshala ama cherry entwasahlobo ingenye yezingxabano kakhulu kwabalimi abanolwazi nabaqalayo. Lezi zinsuku aziqapheli ukutshala amagatsha, ngoba besaba ukulimaza isivuno kanye nokwehlisa umuthi. Abalimi abaqeqeshiwe babheka lokhu kungenangqondo futhi abaqondi ukuthi kungani abantu abaningi benganaki inqubo ebalulekile kangaka.
Indlela yokusindisa i-cherry ebusika: ezihlukahlukene zezikhala
I-cherries ingenye yamajikijolo avamile kakhulu futhi anempilo emasimini ethu. Ukuvuna ubusika akunakwenzeka ngaphandle kwabo. Iziningi zokupheka zokulondoloza ama cherry ebusika yizihlobo zomndeni futhi zizuzwe njengefa. Kodwa mhlawumbe othile uzothola into entsha ekulungiseleleni ama cherry. Kunezindlela eziningana zokubeka imali kwi-cherries ebusika: ukuqandisa konke, "i-vitamin", ukomisa, ukomisa, izithelo ezihlosiwe.
Izici kanye nezici zokutshala cherry "Turgenevka"
Emibhokisini ehlukahlukene yabalimi, i-cherry "iTurgenevskaya" iyaziqhenya indawo, ikakhulukazi ekuxoxweni kwencazelo yezinhlobonhlobo: ithumela izithombe zemithi yazo, futhi ishiye ukubuyekezwa okuningi kanye namathiphu ekutshaleni izithelo ezinomsoco. Sizophinde sicabange ukuthi singakhula kanjani i-cherry ensimini yethu. Cherry "Turgenevka": incazelo yezinhlobonhlobo Izinhlobonhlobo ze-cherry "Turgenevka" yavela ngo-1979 ngenxa yeminyaka eminingana yomsebenzi wabalimi futhi eminyakeni embalwa yaba yinto ethandwa kakhulu phakathi kwabahlali behlobo nabalimi.
Izinhlobonhlobo ze-cherry ezizwa ngencazelo nesithombe
I-cherry i-Felt iyisihlahla esisihlahla esiseduze esifinyelela ngamamitha amabili ukuphakama. Unomqhele ohlangene, ovate noma owenziwe kancane, oqabunga amaqabunga anamanzi kanye namajikijolo abomvu-orange anamathele emagatsheni. Lesihlahla somuthi siphathelene kakhulu nezinambuzane nezifo, nakuba, njengezinye izinhlobo eziningi, zivame ukuhlasela kwe-coccomycosis.
Ukulima kwe-cherry engenambewu engadini, amathiphu amahle kakhulu ekutshalweni nasekunakekeleni
Bessey sandstone cherry ivela eNyakatho Melika. Lapha likhula emigodini yemifula namachibi, futhi ngezinye izikhathi kungatholakala ngisho nasemaphandleni. Ubumnandi beBasesey bungaba umhlobiso oyinhloko wendawo engadini. Ngenxa ye-cherry fruiting cherry sekuyisikhathi eside inqobe ukuzethemba kwabalimi abaningi emhlabeni jikelele.
Ngithanda noma Duk: kanjani ukutshala nokukhula
Ukunambitheka okumnandi kwama-cherry nokusila okuncane kwe-cherries kwelinye iberry elikhulu - inhlanganisela enjalo, ngaphandle kwephupho, i-botanist ye-inveterate. Kodwa emvelweni, konke kungenzeka, futhi ngisho nangaphezulu uma abafuyi bethathwa ukuze kuthuthukiswe ukuvota okungahleliwe. Ngenxa yalokho, abalimi banikezwa ithuba lokuhlakulela i-dyuk noma, njengoba kubizwa ngokuthi, ubumba.
I-Cherry "Inkulu enkulu": incazelo, ukufika nokushiya
Phakathi kwezihlahla ezihlukahlukene zezithelo kumele kugcizelelwe i-cherry. Okungenziwa nje kuphela kusukela kumajikijolo alo muthi: ama-compotes, iziphuzo zezithelo, izigamu kanye nemigodi sekuyisikhathi eside kuba yiziqu ezivamile ekhishini lanoma yiliphi umsikazi. Ngaphezu kwalokho, ama cherry amnandi namanzi avame ukusetshenziselwa ukuhlobisa amaqebelengwane noma ukugcwalisa ama-buns, amadombolo nezinye izitsha.
Izimfihlo zokwenza ama-cherry liqueurs ekhaya
Ukunambitheka kwe-tart ukunambitheka, umbala omuhle we-ruby, iphunga elimnandi - konke okuphathelene ne-cherry tincture edumile emhlabeni jikelele. Kunezindlela zokupheka eziningana eziyisisekelo ze-cherry liqueur okuzenzela: isiphuzo esidala ngokweqile kanye ne-tincture ngaphandle kokuphuza utshwala. Ukukhethwa kwamajikijolo Asikho izidingo eziqinile zokukhethwa kwama-cherry amajikijolo, cishe noma yikuphi okuhlukahlukene okufanelekile.
Sikhula i-cherry kaZhukovsky engadini yethu
UCherry Zhukovskaya wacabangela ukuzalana okuvamile. Izinhlobonhlobo zinde kakhulu futhi zivame ukutholakala ezindaweni zokulima. Cherry Zhukovskaya, incazelo yezinto ezihlukahlukene nezithombe ezingezansi ezizohlinzekwa kamuva kulesi sihloko, ngokusho kokubuyekezwa kunezimfanelo ezinhle kakhulu. Ukukhiqiza kuhlale kugcwele, futhi asikho isidingo sokusebenzisa imizamo ekhethekile yokunakekela umuthi wesithelo.
Izinzuzo kanye nokudla kweLubskaya cherry engadini yakho
Kukhona inombolo enkulu yezinhlobonhlobo zama cherry, ezivame ezindaweni ezihlukahlukene zezulu. Isihloko sethu sinikezwe "iLyubskaya" cherry, esakhulile emasimini aseRussia kusukela ngo-1947. Ake sikhulume ngokuthi singakhetha kanjani futhi sihlwanyele isitsha, masisebenzelane nokunakekelwa, izinzuzo kanye nokulimala kwezinhlobonhlobo. Humushela incazelo emuva ku-isiNgisi Humusha Incazelo Cherry cherries "Lyubskaya" kuqala nge incazelo ezihlukahlukene.
Cherry "Rubral Ural": izici kanye nokulima agrotechnics
I-Cherry "Ural Rubral" iyisihlahla esincane esifike ekuphakameni kwamamitha amabili nesigamu. Izithombe eziningana zaleli cherry zinikezwe kulesi sihloko. Lezi zinhlobonhlobo zinezivuno ezinhle kakhulu futhi zingakwazi ukuvumelanisa nezimo zezulu ezinzima. Kucatshangwa ukuthi i-cherry ihluke ukusabalalisa okuphuzile, izithelo ezinhle ezivuthana ndawonye.
Izimfihlo zokulima ngokuphumelelayo kwe-cherry "Frost"
Morozovka iyinhlobo ehlukahlukene ye-dessert ye-cherry ethandwa phakathi kwabalimi. Isiko sibonakala ngokuqina okukhulu kweqhwa, ukuvunwa okucebile kanye nokunambitheka okukhulu kakhulu kwamajikijolo. Siphakamisa ukuthi ujwayele izici zeMorozovskaya cherry, kanye nama-nuances okutshala nokunakekela lesi sitshalo.Umlando wokuzalanisa i-Cherry "Frost" - izithelo ezincane nezithelo zamaberry, ezitholakala eMichurinsky Research Institute ngo-1997
Ukuhlakulela kwe-cherry isimangaliso: amathiphu amahle kakhulu ekutshalweni nasekunakekeleni
Umlando we-cherry ne-cherry hybrid waqala ngekhulu le-XVII emva kokuvota okungahleliwe kwezitshalo ezimbili zezithelo. Ngenxa yomsebenzi wabalimi, ama-hybrid noma amadada, njengoba abizwa, asebenamandla kakhulu, angamelana nezimo zezulu futhi anakho ukuhluma. "Miracle Cherry": Incazelo kanye Nezici Zezithelo I-Hybrid "Miracle Cherry" yabonakala ngenxa yomsebenzi wama-agronomists ase-Ukraine L.